Nepal : Nampanginin’ny mpandala ny Fitondrana mpanjaka ny renivohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Marsa 2010 21:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Fiitokonana tao Nepal. Sary avy ao amin’ny flickr Nepaliaashishi, ampiasaina amin’ny alalan’ny Creative Commons License
Noteren'ny mpitaky ny famerenana ny fitondram-panjaka araka ny lalampanorenana, sy ny fananganana firenena Haindò ao Nepal nohidiana tanteraka ny renivohitra ao aminy. Ny arabe ao Kathmandu, toerana izay saika tomefy olona miisa an-tapitrisa matetika, dia lasa tahaka ny tanàna haolo izany tamin’io Alatsinainy io, nikatona daholo ny toeram-piasana sy ny toeram-pianarana. Maneho an-tsary ireo toerana tena nisian'ny fanoherana ny ao amin’ny blaogy Mysansar amin’ny fiteny Nepaly.
Fanoherana nantsoin'ny antoko mpandala ny rafi-panjaka Rashtriya Prajatantra (RPP) izay tarihin'ny minisitry ny atitany teo aloha Kamal Thapa, mbola nanontany indray hoe: “mbola hisy hoaviny ve izany fitondrana enti-mpanjaka izany eto Nepal?”
Rehefa nanakaiky ny telon-jato taona no nisian'ny fitondrana enti-mpanjaka dia nambara ho repoblika I Nepaly taorian’ny fifanarahana teo amin’ny governemanta sy ny mpioko maoïsta. Tsy notiavin'ny olona loatra ny mpanjaka Gyanandra tamin’ny nanalana azy tamin’ny taona 2008. Fa ny fahombiazana azon'ny RPP ihany raha niantso fitokonana izy sy ny fomba nataon'ny olona raha nandray ny mpanjaka nandritra ny lanonam-pivavahana fanaon’izy ireo, dia nampiseho fa mbola misy ny olona maniry ny hanome fanindroany ny fanjakana ho an'ny Mpanjaka.
United we blog for democratic Nepal (Miray hina, mibilaogy ho an’i Nepal demokratika), bilaogy iray izay karakaraina vondron’ny mpanao gazety mitatitra ny fizotrin’ilay fotoam-bavavaka.
“Betsaka tamin’ireo mpandala ny rafi-mpanjaka sy ny ankamaroan'ny olona tsy te-hijerijery fotsiny no nanamorona ny arabe mba hitazana ny mpanjaka teo aloha. Nihoby ny sasany rehefa nandalo ny mpanjaka. Nisy vondron’olona nihira Bhajan hoe: tongasoa ry Shah. Ny olona hafa indray kosa nihiaka ny teny filamatra Raja Aaau Desh Bachau na “Miverena ry mpanjaka ary avoty ny firenena”. Filamatra izay mitovy tamin’ilay nohirain’ireo mpankato fatratra (royalists) ny mpanjaka. Nanandrana nitakosona tamin’ny vahoaka I Gyanendra Shah…ary indraindray izy no manetsika ny lohany, nanofahofa ny tanany ary mampiafanohoka ny felatanany roa hanome voninahitra ireo zokibe, araka ny Kantipur. Nisy vehivavy iray nitsangana teo amoron-dalana dia nitaraina hoe: “hajur”…Tsy misy ny fandriampahalemana eto amin’ny firenena” Gyanendra Shah raha nitoetra tao amin’ny Panauti nandritra ny adiny iray sy sasany ka hiverina an-drenivohitra indray dia niteny indraim-bava hoe: “Mirary aho ny mba hisian’ny rariny ary tsy hisy na iray aza hisedra fahasarotana.”
Nitety ireo gazety iraisampirenena ny mpandala ny rafi-mpanjaka mba hampitodika an’izao tontolo izao hanohana azy ireo. Nanoratra tao amin'ny Sri Lanka Guardian i Dirgha Raj Prasai – mpikambana ao amin’ny parlemanta teo aloha, nandresy lahatra fa ny Maoista sy ireo karazana antoko politika isankarazany ireo dia tsy manao afa tsy ny fanimbana an’i Nepal ka tsy misy afa tsy ny fitondran’andriana ihany no afaka manarina ny firenena.
Nivoaka indray ihany koa ny resaka momba ny fametrahana an'i Nepal ho tahaka ny firenena laika. I Prasai tao amin’ny lahatsorany izay efa voalaza etsy ambony, niantso ny famerenana ny fitondrana Andriana, no namoaka ihany koa ny resaka fivavahana hiadian-kevitra, ary nilazany ihany koa fa hanimba ny fotompisainan’i Nepaly ifangaroan'ny kolotsaina Haindò sy Bodista izay tena mampiavaka an’i Nepal manokana ny repoblika laïka.
Miady varotra ny mpitoraka bilaogy Maila Baje fa tokony ialàn’i Nepal ny rafi-pitondrana laïka.
« …Tsy nety ny niaro ny Haindoisma fa milazafanohanana ny fitondrana Andriana nalam-baraka izany. Ho an’ny Maoista, tantara efa lasana izany, no tsy maintsy atao ho tsapan'ny olon-drehetra amin'ny fomba rehetra. ( Fantatry ny mpioko hatry ny ela fa ny betsaka ny famatsiam-bola avy any ivelany hamerenana indray ny endri-drafitra ara-pivavahana ny fitondrana).
Efa ho efa-taona taorian’ny nampiharana ity fandriamapahalemana sandoka ity, dia lasa lamaody ny miala amin'ny fahanginana. Mety ho tsara i Nepal repoblikanina raha mifototra amin'ny maha firenena haindò azy. Efa noheverina ho nanaiky ny fahadisoana tamin'ny fametrahana an'i Nepal ho laika ny filoha Ram Baran Yadav sy ny mpitarika ny maoista Pushpa Kamal Dahal. Ekena fa tamin'ny fihaonana tsotra tamin'ny lehilahy mpanao raoby haindò no nanaovany izany. Fa saingy nampirona kokoa ny praiminisitra lefitra Sujata Koirala izany hiharihary kokoa. Mitaky ny hisian'ny fitsapankevi-bahoaka izy mba hamantarana raha tokony miverina ho fanjakana Haindò i Nepal.”
Ny fahombiazana eo ho eo ihany azon'ny RPP niantso fanoherana ao amin'i Katmandou izay nihanalalaka (ara-pahafahana politika) dia tsy hisalasalana ho famantarana fa efa ho roa taona aty aorian'ny fanambarana ampahibemaso ny maha-firenena laïka an'i Nepal dia mbola misy karazan'olona maro izay tsy afa-po velively ary tsy resy lahatra mihitsy momba izany fanovana izany. Miankina amin'ny mpitondra sy ny olona no manapa-kevitra ny fomba hiatrehana ireo olo-maro tsy resy lahatra ireo.
02 Novambra 2021Azia Atsimo